'एमालेले समेत संसदिय व्यवस्था र्निविकल्प हैन भन्नुले शंका उत्पन्न भएको छ' : डा.शेखर कोईराला - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘एमालेले समेत संसदिय व्यवस्था र्निविकल्प हैन भन्नुले शंका उत्पन्न भएको छ’ : डा.शेखर कोईराला
Posted by Headline Nepal | २७ कार्तिक २०७४, सोमबार १८:०२ |
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा नेता डा.शेखर कोईराला यति बेला चुनावी दौडाहमा छन । पार्टीभित्र खुलेर आफ्ना धारणा राख्ने नेता कोईराला आम कार्यकर्ता माझ लोकप्रिय छन । उनै कोईरालासंग आसन्न निर्वाचन र विराटनगर प्रदेशको राजधानी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा हेडलाईन नेपालले गरेको कुराकानी ।
विराटनगरलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बनाउन पर्ने कारण के ?
विराटनगर मात्रै हैन सबै ठाँउमा आफ्नो राजधानी बनाउन पर्छ भनेर सबै पार्टी लागिरहेका छन । जस्तो इटहरीलाई नेपाली कांग्रेसकै साथीहरु राजधानी बनाउन पर्छ भनेर लागेका छन । धनकुटामा त्यस्तै छ । दमक बनाउन पर्छ भन्ने साथीहरु नि हुनुहुन्छ । हामी विराटनगरवासी लागेका छौँ । विराटनगर एउटा पुरानो सहर र यसको आफ्नै राजनितिक महत्व छ । तर विराटनरगमा मात्रै सबै कुरा राख्ने भन्ने हैन । विराटनगर एउटा सिम्बोलिक हुन्छ र त्यसका चारैतिर त्यसका अफिसहरु,मन्त्रालयहरु भवनहरु बन्ने हो । विराटनगर पुरै राजधानी बनाउन सक्ने अवस्था छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । हामीहरुले जग्गा लिनुपर्ला, त्यसकारण हामीले चारैतिरलाई समेटेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसको छुट्टै राजनितिक पृष्ठभुमी भएकै कारण मात्र हो । अरु त्यस्तो खासै छैन ।
अरु पुर्वाधारले कस्तो छ ? विराटनगर
अरु ठाँउभन्दा पुर्वाधार बनेको ठाँउ हो, विराटनगर । जस्तो मोरङलाई लिँउ न, पुर्वाधार भनेको विराटनगर मात्रै हेर्ने होईन नी । मोरङ कै कुरा गर्दाखेरी पुर्वाधार हेर्ने हो भने अरु ठाँउ भन्दा धेरै बेँसी पुर्वाधार छन । जस्तो भनौ न एयरपोर्ट,विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज यही छन, यी सबै कुराले गर्दा विराटनगर राजधानी बनाउन उपयुक्त ठाँउ हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको रुपमा कसैलाई अघि सारेको जस्तो देखिएनन्, अरु पार्टीले तोकेरै प्रचार गर्दा कांग्रेसबाट को हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस जव जितेर जान्छ । त्यसपछि निर्णय गर्छौँ । किनभने हामीहरु संसदिय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ । संसदिय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टीले निर्वाचन अघि नै मेरो मुख्य मन्त्री यो भन्नुभन्दा पार्लियामेन्ट्री पार्टीले निर्णय गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ । नत्र भने त संसदिय व्यवस्थाको विधि नै जान्छ नी । जितेर गएको सांसदहरुले वा प्रदेशका सांसदहरुले त्यो निर्णय गर्नेछन । हामीहरु कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेछौ भनेर ।
तपाईको नाम चाँही भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा आईरहेको छ ,यस कुरालाई डाक्टर साहेवले कसरी लिनुभएको छ ?
हैन मान्छेहरुले भन्ने आफ्नो ठाँउमा हो । जिम्मेवारी पाँए भने गर्नसक्छु जस्तो लाग्छ ।
त्यसोभए यसलाई तपाईले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ ,
हैन ,जिम्मेवारी पाँए भने गर्छु, तर म त्यसको लागि ह्याङकर गरेर हिँड्ने मान्छे त होईन, मैले भने नी संसदिय पार्टीले निर्णय गर्ने हो नी यो कुरा ।
अहिलेको निर्वाचनलाई हामीले निर्वाचनकै रुपमा लिनुपर्छ की जनमत संग्रहको रुपमा ? यसमा नि विवाद छ, तपाँईले कसरी लिनुभएको छ ?
कम्यूनिष्ट गठबन्धन जव भयो नी, यसले गर्दाखेरी जनता अलिकती आत्तिएको म देख्छु । भोली कसरी जान्छ ? यो गठबन्धन , बाम गठबन्धन त भन्दै भन्दिन म, एमाले र माओवादीको गठबन्धन भन्छु । उहाँहरु नै बोल्दै हुनुहुन्छ, ओली जी ले विराटनगरमा र दमकमा आएर के भन्नुभयो भने संसदिय व्यवस्था र्निविकल्प हैन है । पक्का पनि हो कुनैपनि व्यवस्था र्निविकल्प हुँदैन ।
तर उहाँहरुको भित्रि आशय के हो त भनेर बुझ्दाखेरी मैले बुझेको चाँही एक दलिय शासन व्यवस्था नै हो र त्यो व्यवस्थाको पहिलो चरणको खुट्किलो भनेको राष्ट्रपतिय शासन प्रणली नै हो । मैले बुझेको चाँही त्यो हो । उहाँहरुले त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा ल्याउनु भएको छ । त्यसकारण त्यो कुरालाई मध्येनजर गरी हामीहरु अघि बढ्नुपर्छ । अहिले भर्खर संविधान जारी भएको छ र संविधान जारी भएपछि उहाँहरु नै संसदिय व्यवस्थालाई अंगालेर हिँडेको अहिलेको राजनितिक दल एमाले हुँदै हो । माओवादीले त त्यसलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आफ्नो असमझदारी जाहेर गरेको छ । तर एमालेले अहिले आएर चुनावको मुखमा संसदिय व्यवस्था र्निविकल्प हैन भन्नु चाँही मलाई कता कता अलिकती शंका लागिरहेको छ ।
Previous‘राजतन्त्र पनि फर्किँदैन,राप्रपाले पनि बोक्दैन, प्वाक्क भन्न मात्र गाह्रो भएको हो’ : ओली
Nextसुनसरीमा ठूलो परिमाणमा हतियार बरामद !
डीआईजी सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)
८ चैत्र २०७३, मंगलवार १९:००
‘३३ बर्ष देखि राजधानीमै बसेर काम गरेको मान्छे कसरी बाहिरिया हुन्छ ?’ : डा. महत
१८ कार्तिक २०७४, शनिबार ०९:२६
एमालेको घोषणापत्र आज सार्वजनिक हुँदै : सामाजिक समानता र न्याय सहित आर्थिक सम्बृद्धिमा जोड
१७ बैशाख २०७४, आईतवार ११:०२
‘प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपार्इ सुरु,समानुपातिकको सकियो’ : आयोग
१० कार्तिक २०७४, शुक्रबार १६:४६